Akụkọ - Ekwefula, achọghị: Ego ole ka mkpofu ihe karịrị akarị?
akpa akwụkwọ rọba
ngwaahịa nwere ike iwepụ
disposable onu ogbom
iko kọfị mpempe akwụkwọ
ngwaahịa ere ere
ọka stachi ngwaahịa
akwụkwọ PLA ngwaahịa
Ekwefula, achọghị: Ego ole nkwakọ ngwaahịa dị oke?
Nkwakọ ngwaahịa bụ ihe dị mkpa: chee ụwa nke na-enweghị ya.
Enweela ụdị ụfọdụ nke nkwakọ ngwaahịa ma a ga-enwe ya mgbe niile, mana enwere ụzọ anyị ga-esi kwụsị mmetọ mmetọ na ihe mkpofu sitere na mkpa ndị a nke ndụ? Ebee ka anyị na-enweta akara na nkwenye ịnakwere eziokwu nke mkpofu nkwakọ ngwaahịa na ndụ anyị?
Otu n'ime ihe nkwakọ ngwaahịa kachasị agbatị bụ nke nwere ike ịdị na-egbu egbu iji mepụta. Ọ dịkwa ezigbo ike nke na-eme ka o siere ya ike ịgbagha ma ọ bụrụ na a gaghị eji ya emegharị. Ma, eziokwu bụ, ọ bụghị ụlọ ọrụ niile na-emegharị, kama ịnwe ka mkpofu nkwakọ ngwaahịa ha kpochapụ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Gịnị ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na ndị a na-ekesa ga-amalite imegharị plastic, akwụkwọ, na kaadiboodu ha? Ha agaghị echekwa naanị ego, ha ga-enye aka ịchekwa gburugburu ebe obibi site na ndị na-emetọ ihe egwu.
Ma ọ bụ ma eleghị anya, ha nwere ike ịchọta ụzọ ọzọ maka ịgbatị ihe na ngwugwu nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ na-ewe ọtụtụ ihe mkpofu. Ihe nwere ike idochi ya nwere ike ịbụ ihe eji egbochi palletized nke na-egbochi ịmịpụ ngwaahịa mgbe echekwara na pallets. Offọdụ n'ime nrapado ndị a nwere ike ịdị ọnụ ala karịa eriri. Ha nwekwara ike mepụta obere mmetọ iji rụpụta. Eriri eriri nwere ike iji ya mee ihe atọ iji dochie ịgbatị agbatị ma ka na-ejide ngwaahịa na ebe. Enwere ụfọdụ ụfụfụ na-achọ mmiri mgbe mmiri dị. Nke a dị mma maka gburugburu ebe obibi, mana enwere ike ọ gaghị adị mma maka mbufe ma ọ bụ nchekwa.
Dị ka eco-enyi na enyi dị ka imegharị ihe maka iji gị nkwakọ n'efu nwere ike iyi, ọ bụghị kpamkpam akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Iji megharịa akwụkwọ na kaadiboodu, a na-agwakọta akwụkwọ ndị ahụ na mmiri iji mepụta pulp dị ka ihe. Nke a na-eme ka eriri ahụ gharazie ike ka ihe ndị a rụzigharị siri ike, a na-agbakwunye ibe osisi n'ime ngwakọta pulp yana ọgwụ ndị ọzọ na-ewepụ adịghị ọcha.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike imegharị ihe nkwakọ ngwaahịa gị, gbalịa ịzụta ihe a na-emebi emebi ka ọ nwee ike ire ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị tụfuo ma ọ bụ chọta ngwaahịa enwere ike iji ya ọtụtụ oge, dị ka akpa ikuku na ahụekere. Mbelata nbudata nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa maka ụlọ ọrụ na-emepụta ọtụtụ ya. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike iri oge ma na-agwụ ike, mana, na njedebe, Nature Nature ga-ekele gị.
Post oge: Jul-24-2020
Adress: Nke 5051, Shengli East Str, Kuiwen District, Weifang City, Shandong Pro, China
Packaging ọnọde Market adịkwaghị Site Na ...
Imefusị bụghị, achọghị: Olee ole nkwakọ w ...